Inona no azo entina anaty valizy handeha amin'ny fiaramanidina? | Vaovao momba ny dia
Inona no azo entina ao anaty valizy?
Monica sanchez | | fiaramanidina, soso-kevitra
Iza no tia manangona? Io ilay ampahany mazàna no mandreraka indrindra, eny, izy irery ihany. Saingy rehefa avy nanapa-kevitra ny amin'izay halehantsika manaraka izahay sy orinasa iza no hanidina anay, ny fanangonana entana dia iray amin'ireo zavatra izay maharitra indrindra amintsika.
Satria inona no azo entina anaty valizy? Ary inona no voarara? Ny lisitra dia be dia be, mba hisorohana ny olana sy ny olana Hanampy anao aho amin'ny fanomanana valizy.
1 Zavatra tsy zaka amin'ny fiaramanidina
1.1 Zavatra maranitra
1.3 Fitaovana sy akora simika
1.4 Afaka mitondra sakafo amin'ny fiaramanidina ve ianao? Ary zava-pisotro?
2 Ireo zavatra izay tsy voarara, fa mety hiteraka detector vy
3 Zavatra azonao raisina amin'ny fiaramanidina
3.1 Fitaovana elektronika
3.3 Sakafo ho an'ny zanakao sy ny fanafody
Zavatra tsy zaka amin'ny fiaramanidina
Na eo aza izany, isika rehetra dia samy manana ny eritreritsika momba ireo zavatra izay tsy tokony ao anaty valizintsika, fa ny marina dia misy olona maro izay misalasala ny amin'ny sasany, indrindra ireo izay tena ilaina tokoa rehefa tonga ny fiaramanidina. Ka, Iza amin'ireo no tsy maintsy avelantsika ao an-trano?
Voarara ny zava-maranitra rehetra, toy ny paosy gilasy, antsy (afa-tsy raha vita amin'ny plastika), hareza, sabatra. Tsy maintsy apetrakao koa ny hareza satria mety hiteraka fahavoazana izany. Fantatray fa tsy handratra an'iza na iza ianareo, saingy tsy fantatr'izy ireo izany eny amin'ny seranam-piaramanidina, ary mazava ho azy fa tsara kokoa ny miaro tena toy izay miala tsiny. Ary koa, ny iray amin'ireo zavatra izay tsy avela na inona na inona toe-javatra dia ny basy na fitaovana mipoaka: basy, aerosol, baomba plastika, grenady, na lasantsy na toy izany. Tena mampidi-doza izy ireo, noho izany dia tsy hosamborin'ny Control izy ireo.
Raha atleta ianao na tsy maintsy manao fanatanjahan-tena any amin'ny toerana aleha, miala tsiny indrindra izahay milaza aminao fa tsy azonao atao izao manaraka izao: harpoon fanjonoana, tehina ski, hazokely golf na hockey, ramanavy baseball, tsipìka na zana-tsipìka. Azonao atao ny mindrana izany amin'ny olona fantatrao any, na manofa azy mihitsy.
Fitaovana sy akora simika
Amin'ny lafiny iray, tsy azo atao koa ny fitaovana, toy ny famaky, valizy, fandavahana, tsofa, tsofa, na ireo izay ampiasaina amin'ny zaridaina handrantsana ireo zavamaniry. Aza manahy anefa: raha mila azy ireo ianao, ohatra, raha te hanao asa ao an-trano, dia azo antoka fa ho afaka hamela azy ireo ho anao izy ireo. Indrisy, tsy maintsy apetrakao ihany koa ireo fitaovana kanto sy akora simikaNa ny paoka, ny loko na ny baomba mandatsa-dranomaso.
Afaka mitondra sakafo amin'ny fiaramanidina ve ianao? Ary zava-pisotro?
Ary ahoana ny amin'ny sakafo sy zava-pisotro? ¿Azo entina anaty fiaramanidina ny sakafo? Na hitsidika ny fianakavianao ianao, na raha te hitondra zavatra avy any ianao, dia tokony ho fantatrao fa araka ny fenitra napetraky ny International Civil Aviation Organization (ICAO) sy ny European Conference Aviation Conference (CEAC), sary avela hitondra ranon-tsavony hatramin'ny 100 millilitre, ary raha mbola ao anaty kitapo plastika mangarahara sy 20 santimetatra x 20 santimetatra izy ireo. Mikasika ny sakafo, ny voarara dia: saosy, jellies, fromazy, yaourt sy ny sisa.
Raha izany, raha mankany ohatra ianao mankany Mallorca (Nosy Balearic, Espana) ary te-handray ensaimada dia ity mila fakana faktiora; raha tsy izany dia afaka mahazo sazy 30 € eo ianao miankina amin'ny orinasa.
Na izany aza, Manoro hevitra anao izahay hamaky ny politikan'ny kaompaniam-pitaterana anao hahitanao raha afaka mitondra sakafo eny ambony fiaramanidina ianao na karazan-tsakafo avelan'izy ireo. Amin'ny tranga sasany dia misy fiovana isan-karazany ka alohan'ny handehanana any amin'ny seranam-piaramanidina miaraka amin'ny sakafo dia alao antoka fa afaka mitondra sakafo amin'ny fiaramanidina haleha ianao.
Ohatra, tamin'ny dia nankany Portugal dia nividy fitoeran-tsiranoka tena tsara aho mba homena ny havako sy ny namako fa satria nihoatra ny habetsaky ny mililatera avela dia nilaozako izy ireo tamin'ny tany. Na izany aza, avela ny karazan-tsakafo hafa, noho izany Eny afaka mandray sakafo amin'ny fiaramanidina ianao, na dia misy maningana aza.
Raha intercontinental ny sidina dia misy sakafo izay tsy azo entina any amin'ny firenena mifanila aminy noho ny loza mety hitranga amin'ny fahasalamam-bahoaka.
Ireo zavatra izay tsy voarara, fa mety hiteraka detector vy
Ho fanampin'ny zavatra rehetra noresahintsika, misy zavatra maromaro izay mety hiteraka fantsom-by, toy ny tevika, fivarotan-tena, firavaka, finday, zapatos ary ny fehikibo.
Manindrona: isaky ny azo atao, atoro anao izany esory izay azonao atao rehetra. Na izany aza, ny tena mety hitranga dia ny fampidinana ny detector, amin'izay vao hiteny ianao hoe manao antsy sy voila ianao.
Prosthesis: zava-dehibe ny mampahafantatra alohan'ny scanning.
Jewels: alohan'ny handalovana Control kavina, rojo ary haba no tsy maintsy esorina mba tsy hiteraka ny detector. Hataontsika ao anaty lovia izy ireo izay azontsika alaina alohan'ny scan.
Finday: mitovy amin'ny firavaka, na mety kokoa aza: hapetrakay ao anaty valizy izany alohan'ny handehanana mankany amin'ny terminal.
Kiraro: raha manana zavatra vita amin'ny vy izy ireo, na firavaka na buckle, tsy maintsy esorinao izy ireo alohan'ny scanning.
Belt Buckles - Feo foana ny detector, noho izany tsy misy safidy afa tsy ny manala azy aloha.
Zavatra azonao raisina amin'ny fiaramanidina
Ankehitriny rehefa hitantsika izay rehetra tokony havelantsika ao an-trano, ankoatry ny fomba hisorohana ny fotoana ratsy amin'ny Security Control, andao hojerentsika hoe inona ireo zavatra mampiahiahy azontsika raisina nefa tsy misy olana:
Amin'izao fotoana izao, tsy misy te hiala ny azy ireo Fakan-tsary, takelaka, notebook lavitra ny azy finday avo lenta, fahamarinana? Soa ihany, any amin'ny seranam-piaramanidina izy ireo dia tsy hilaza na inona na inona amintsika mihitsy raha entintsika ao anaty valizintsika izany na entintsika. Azontsika atao ny mitondra azy amin'ny tanana, fa hisorohana ny halatra tsara kokoa ny mametraka azy ao anaty valizy. Amin'ity fomba ity dia ho voaro kokoa ianao.
Oh, ny tarehy fanatsarana tarehy! Tsy azon'izy ireo atao tsy hita koa ireo deodorant, na ny lokomena. Afaka mitondra koa ianao gela fanafody raha tsy mihoatra ny fetra 100ml izy ireo. Oh, ary aza adino izany hair clip.
Sakafo ho an'ny zanakao sy ny fanafody
Raha mbola misotro ronono avy amin'ny tavoahangy ny zanakao na mihinana porridge dia azonao atao ny mitondra ny habetsaky ny sakafo ilaina hamahanana azy. Ary koa, raha mihinana fanafody ianao dia tsy hilaza zavatra aminao koa izy ireo; Tokony ho azonao antoka fa ao anaty kaontenera tany am-boalohany izy io ary mitondra ny dokotera.
Ary tsy misy hafa. Raiso ny kara-panondronao (sy ny pasipaoro raha sidina iraisam-pirenena), ary mankafiza!
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » Tsangatsangana » soso-kevitra » Inona no azo entina ao anaty valizy?
enedelia castillo gonzalez dia hoy izy:
Salama, rahampitso tolak'andro, manana fisalasalana kely aho, hisaotra anao aho mamaly ahy.
Manana ny zanako mianatra any Arzantina aho, nomen-dry zareo vatomamy, tortillas katsaka, kapoaka, fromazy, sakay mena, misy zavatra azon'ny olona valio ahy raha azoko raisina izy ireo.
Mamaly an'i enedelia castillo gonzalez
Yaakov Avdo Serrano dia hoy izy:
Ohatrinona ny lanja totalin'ny harona tanana sy ny valizy hapetraka ao am-pelatanan'ny fiaramanidina, olona iray?
Valiny tamin'i Iaakov Avdo Serrano
Raha ny zaza tsy ampy taona dia avela hitondra valizy mitovy amin'ny olon-dehibe ihany koa?
Mihatra amin'ny seranam-piaramanidina any Amerika atsimo ve ilay lalàna manan-kery?
Ankasitrahako ny valinteninao ara-potoana.
Kenia Hernandez dia hoy izy:
Valiny tamin'i Kenia Hernandez
Ao Buenos Aires aho ary nividy fitaovana fanodinam-panafody ara-pahasalamana.Fitaovana elektronika, azo atao ve ny mitondra azy ao amin'ny trano fitobiana ao amin'ny ekipa Normel sa mila mandoa vola hafa aho ???
Azoko atao ve ny mitondra aerosol ara-barotra na famafazana santionany amin'ny valiziko voamarina?
islay dia hoy izy:
Salama, te hanamafy aho raha azo atao ny mitondra ranomanitra 50 milliliter ary firy amin'izy ireo no azo entina.
amin'ny sidina mankany Amerika atsimo avy any Londres ary manao gara any Espana.
danyleny dia hoy izy:
Firy ny menaka manitra azonao anaovina ny havako ...
Mamaly an'i danyleny
Mba handehanana any Kolombia sy Panama, inona avy ireo takiana tokony harahin'ireo valizy? MISAOTRA
Yoselyn dia hoy izy:
Salama, tiako izany. Mipetraka any Iquique aho. Afaka mitondra tavoahangin-toaka ho any Santiago amin'ny fiaramanidina ianao. Manantena aho fa afaka mamaly ahy ianao, misaotra.
Mamaly an'i Yoselyn
Salama!!!! Handeha hivezivezy avy any Buenos Aires mankany Panama aho avy amin'i Aerolineas Copa ary angamba raha misy olona afaka mampahalala ahy (satria tsy misy mahay mamaly ahy) raha afaka mitondra toaka ao anaty valiziko aho ary ohatrinona no avela isaky ny olona?
Misaotra betsaka noho ny fanampianao HATRANY IZAO no diako voalohany nataon'i PLANE …….
Valio amin'i LIZ
Mila mandeha avy any Espana mankany Frantsa aho, azoko atao ve ny manara-maso ireo zava-pisotro mahazatra ataoko anaty brik sy vokatra mangatsiaka miaraka amin'ny kitapo isothermal ???
ny fitohanana dia hoy izy:
Azonao atao ny mandray ny zavatra tadiavinao rehetra fa ny zavatra tokana tsy azonao dia vevidas toy ny ronono alikaola
Mamaly ny fitohanana
Mela dia hoy izy:
Manana namana vitsivitsy any Kolombia aho ary nasain'izy ireo tamina sakay sy fromazy maina aho, azoko atao ao anaty valizy ao anaty lakaly ve izany?
Mamaly an'i mela
cristina maria c. ferreira dia hoy izy:
Isaky ny tavoahangy misy divay azoko avy any Portugal mankany Tenerife, fakana faktiora, mazava ho azy ao Ryanair
Mamaly an'i cristina maria c. ferreira
Alejandra Frola dia hoy izy:
Salama, handeha ho any Rio de Janeiro aho ary hitondra menaka manitra maro homena ny Rahalahin'ny Fiangonana Kristiana, tiako ho fantatra hoe ohatrinona no azoko alaina ary raha afaka mihinana divay 2 tavoahangy koa aho. MISAOTRA
Mamaly an'i alejandra Frola
Tsy azo atao ny mitondra tavoahangy misy divay satria mihoatra ny habetsany azo: 100 ml. Afaka mitondra menaka manitra ao anaty valizy fotsiny ianao raha tsy mihoatra io vola io ihany.
soralla dia hoy izy:
Salama, amin'ny volana Janoary dia handeha avy any Medellín mankany Cartajena aho amin'ny alàlan'ny avianca areolinea, namana vitsivitsy izay ananako any, naniraka ahy izy ireo hitondrako trondro izay tsy mora hita eo, ary koa vatomamy sy voankazo. Te hahafantatra aho raha avela hitondra eo amin'ny fiaramanidina. Misaotra anao.
Mamaly an'i soralla
yerlis perez martinez dia hoy izy:
Salama, Kolombiana aho ary mila miverina avy any Arzantina mankany Kolombia ary tiako ho fantatra hoe ohatrinona ny zava-pisotro misy alikaola litatra azoko entina ao anaty valizy sy ao anaty valiziko, mba tsy hananako olana rehefa miala any Arzantina na rehefa miditra Kolombia, misaotra
Valio i yerlis perez martinez
Tamara kaufmann dia hoy izy:
Azo atao ve ny mitondra fromazy banga sy hazan-dranomasina mangatsiaka any Arzantina?
Valiny tamin'i Tamara Kaufmann
Salama, te hahalala aho.
Afaka mitondra akanjo vitsivitsy avy any Porselana ao anaty kitapoko aho, mankany Ekoatera aho, misaotra betsaka
Mamaly an'i bertha
Zuzu dia hoy izy:
Ka tsy misy makiazy amin'ny valizy tanana? ny reniko ahoana ny fahaverezan'ny kitapon'izy ireo ...
Valio i Zuzu
maria martinez dia hoy izy:
Tiako ho fantatra hoe ohatrinona ny lanja vitako raha mitondra pisco, mofo, mofo Paka, mofomamy ary ary indraindray aho nitondra ireto sakafo ireto, saingy tiako ho azo antoka.
Mamaly an'i maria martinez
FILOMENA CORDERO GALVEZ dia hoy izy:
MBOLA Hahafantatra aho raha afaka mitondra ny soa azoko ho any amin'ny WAREHOUSE, PANETON, KINKONG.
Valio amin'i FILOMENA CORDERO GALVEZ
Valiny amin'i FILOMENA CORDERO GALVEZ
Fatima dia hoy izy:
Te hahafantatra aho raha azo atao izany na raha mila fahazoan-dàlana aho na mandoa raha azo atao ny mitondra hazan-dranomasina, toy ny makamba, horita ... Ary hen'omby any Nikaragoà ???? Miandry ny valinteninao dia misaotra
Valiny amin'i Fatima
victor julio martinez garzon dia hoy izy:
Te haka chia fonosana avy any amin'ny magazay Costco mankany Colombia aho
Mamaly an'i victor julio martinez garzon
Rosary. dia hoy izy:
FITORIANA AVY AMIN'NY MEXICO COLOMBIA BARCELONA AFAKA MITONDRA NY TRANO VOAASA VOAZANA TAMARINDO? IZA NO VOLA? ……… Manantena aho fa hamaly ahy izy ireo.
Valiny tamin'i Rosario.
Te hahafantatra aho raha afaka mitondra zavamaniry ao anaty valizin'ny tanako na ny mifanohitra amin'izay dia mila manamarina azy aho (manidina miaraka amin'ny Emirates avy any Thailandy izahay - Dubai - Madrid)
chilo dia hoy izy:
raha mbola tsy mandoto ianao
Mamaly an'i chilo
Hector hugo kuhn dia hoy izy:
Salama, salama, sidina avy any Buenos Aires mankany Mexico ,,, mila fantatro raha afaka mitondra tavoahangy misy divay ary firy ??!
Valiny tamin'i Hector Hugo kuhn
Any Etazonia dia omena alalana ihany ny fitaterana rano mihoatra ny 100 ml amin'ny kaontenera mangarahara
Te hahafantatra aho raha, rehefa tsy ampy taona, afaka mitondra toaka sy sigara? Ary raha azoko atao, firy litatra no azo atao!
Salama, salama, hitety an'ity 27 ity any Cusco, Arequipa aho, azafady, tiako ho fantatra raha afaka mitondra mofomamy ho an'ny zanako lahy aho amin'ity tsingerintaona nahaterahana ity, azafady mba afaka manampy ahy ianao, misaotra ...
Helen drina alfaro contreras dia hoy izy:
Avy any la serena mankany Iquique aho ary mangataka ahy ny fianakaviako hitondra azy ireo fromazy osy.
Mamaly an'i Helen drina alfaro contreras
Moses Joseph dia hoy izy:
Salama, te hahafantatra aho raha afaka mandray zana-kazo voasarimakirana
Valiny tamin'i Mosesy Joseph
Henrich klassen Neufeld dia hoy izy:
Salama, avy any Mexico mankany Colombia aho. Te hahafantatra aho raha afaka mandray kitapo misy voatabia? MISAOTRA
Valiny tamin'i Henrich klassen Neufeld
Salama, te hahafantatra aho raha afaka mitondra ny takelaka misy ahy, nandeha tamin'ny bs hatrany Salta izy io
Fiatoana Ingrid dia hoy izy:
Salama . Handeha ho any Silia avy any Norvezy aho. Afaka mitondra fromazy voafafy sy voa voaisy fonosana koa ianao. Mila izany fampahalalana izany aho
Valio ny fijanonana Ingrid
Salama te hahafantatra raha afaka mitondra zava-mamy ao anaty valizy mofomamy valizy, panettone sôkôla, zavatra toa izany
LICET WAR dia hoy izy:
afaka mandray elo amin'ny fiaramanidina ianao
Valiny amin'i LICET GUERRA
Salama tsara ry andro. Misy mahalala ve raha afaka mitondra sakafo any ambaratonga any Kolombia aho sy ny fomba sy ny toerana tokony ividianana azy. Tiako ny fampahalalana.
MIRIAN BERSANI dia hoy izy:
Salama !! MANARAKA AMIN'NY AA HATSORATRA I AA, TE HITAKY fanomezana kely toa ny karatra sy ny lakileny, Aiza no apetrako amin'izy ireo ??.
Valio amin'i MIRIAN BERSANI